Ụlọ ọrụ CNC na-atụgharị igwe na-atụgharị osisi - China CNC osisi na-atụgharị igwe na-emepụta ihe, ndị na-ebubata ya.
China CNC rụpụtara 1530 akpaaka CNC lathe na-arụ ọrụ Baseball Bat CNC Osisi na-atụgharị Lathe
Nkọwa okwu CNC Wood Lathe Brief: Lathe osisi bụ ngwaọrụ nwere ike ịmepụta ihe dị ka ọkwa steepụ, ihe n'osisi, na ndị ọzọ.A na-arụ lathe osisi CNC site na otu panel nke onye ọrụ na-achịkwa.Emebere igwe lathe maka cylindrical ma ọ bụ conoid workpieces, dịka ọmụmaatụ ogidi, ihe mgbochi, ụkwụ oche, wdg.All lathes na-arụ ọrụ otu ụzọ.USB ohere ngwaọrụ,atụgharị garland, a molding.single axis, double agụba,2 iberibe agụba cutters.Parameter nke cnc osisi lathe: nkọwa Paramet...
China CNC rụpụtara 15030 Baseball Bat CNC Osisi na-atụgharị lathe maka ime ụkwụ tebụl.
15030 Machine Lathe Machine, Lathe for Ting Wood, Automatic Wood Lathe Machine maka ụkwụ tebụl Billiard
1. Ogologo ọrụ kachasị elu bụ 1500mm, oke ntụgharị ntụgharị bụ 300mm (nwere ike ịhazi ya)
2. Ndị na-egbu osisi abụọ n'akụkụ abụọ nke igwe, na-arụkọ ọrụ ọnụ, melite arụmọrụ nke ukwuu
3. Linear square rails, bọọlụ skru na electronic components.
4. Nhazi ígwè nkedo, ọrụ dị arọ, zere ịma jijiji mgbe mkpịsị mkpịsị na-agbagharị ngwa ngwa.
5. Enwere ike ịdọrọ faịlụ site na AUTOCAD ma ọ bụ ngwanrọ ọzọ, nyefee site na USB.
6. Sistemụ arụmọrụ ọkachamara, ọrụ dị mfe.
7. Ọ bụrụ na ịchọrọ kanye ụkpụrụ, anyị ga-agbakwunye spindle na igwe iji mee ya.
CNC Osisi na-atụgharị Lathe Central Machinery nwere mma abụọ axis anọ
Tebụl na-arụ ọrụ osisi oche ụkwụ akwụkwọ ntuziaka osisi na-atụgharị oyiri igwe lathe
Ngwaahịa Description nlereanya dịghị APEX3026 ike 2.2kw spindle ọsọ 2800r / min max na-arụ ọrụ ogologo 1450mm max na-arụ ọrụ dayameta 220mm arọ 450kg n'ozuzu akụkụ 2590*800*1240mm Ngwa osisi lathe igwe A na-ejikarị eme ihe maka nhazi cylindrical handrails, ngwaahịa ndị ọzọ profi. .Manual profiling nhazi ka ọsọ, Mgbe okpukpu abụọ etiti, ike ike ụgbọ ala nwere ike ịbụ ezigbo aka, mgbe egweri nwere ike ịbụ sanding.
15030 Igwe eji akwa igwe na-atụgharị osisi CNC akpaaka na Sanding maka kọlụm Rome
Nkọwa okwu CNC Wood Lathe:
APEX 1516 Otu osisi axis CNC na-atụgharị lathe maka ụkwụ baseball
Isi ihe dị na lathe osisi cnc
1. A na-eji igwe anaghị agba nchara na-agbakọ igwe dum, nke na-eme ka ọ dị elu na-ekpo ọkụ na nrụgide nrụgide na-ama jijiji,
Ibu igwe ruru 1500kgs iji jide n'aka na lathe ahụ kwụsiri ike na ọ nweghị nkwarụ.
2. Pụrụ iche ejiri maka ntụgharị osisi na ihe osise cylinder osisi, maka ụkwụ tebụl, ụgbọ elu steepụ (banister), wdg.
3.Adopting elu handheld DSP usoro na USB ọdụ ụgbọ mmiri nke dị mfe na-arụ ọrụ ọbụna na-enweghị a kọmputa
4. Nabata Germany bọọlụ ịghasa na Taiwan HIWIN helical square ndu okporo ígwè na elu nkenke na ogologo ndụ.
5. Dakọtara na ọtụtụ CAD/CAM imewe software, eg type3, artcam, wdg.
6. Na-atụgharị ọsọ nwere ike gbanwee site inverter nwekwara ị pụrụ ịhụ ọsọ na akara kabinet panel
7. Otu oge ngwá ọrụ ntọala imecha dum ọrụ ibe.
8.Turning, broaching na osise nwere ike ime otu igwe site na nnukwu ọsọ
Igwe na-ere ọkụ osisi CNC Lathe nwere eriri kwụ ọtọ
A na-eji otu axis cnc osisi lathe naanị maka ntụgharị 3D na broaching, ma a na-ejikwa ya maka ịkpụkpụ 3D na ịcha ihe na-eji eriri ndị ọzọ, ugbu a 4 axis CNC osisi lathe kacha mma maka ire ere na ọnụ ahịa ọnụ.Nkọwa ngwaahịa 4 Axis CNC osisi lathe Atụmatụ 1. Ihe nkedo nkedo akwa akwa akwa.Zere ịma jijiji mgbe moto na-agbagharị ngwa ngwa maka nnukwu usoro workpiece usoro, na mbịne ọsọ nwere ike gbanwee site ugboro Ntụgharị.2. 4 axis CNC osisi lathe nwere otu chack na ...
Abụọ Axis akpaaka CNC Osisi na-atụgharị Lathe na-atụgharị maka ụgbọ oloko
All lathes na-arụ ọrụ otu ụzọ.USB ohere ngwaọrụ,atụgharị garland, a molding.single axis, double agụba,2 iberibe agụba cutters